अक्सिजन नपाएर बिरामीको मृत्यु हुन थालेपछि डाक्टर नै रुन थाले
12th May, 2021 Wed २०:२३:०६ मा प्रकाशित
बुटवल । रुपन्देहीमा अक्सिजनको हाहाकार मच्चिएको छ । बुधबार मात्रै बुटवल र भैरहवाका अस्पतालका ९ संक्रमितको अक्सिजन सप्लाई रोकिएर मृत्यु भयो । बुटवलको कोभिड विशेष अस्पतालमा आज दिउँसो ५ जना संक्रमितको अक्सिजन अभावमा मृत्यु भयो । त्यस्तै भैरहवाको भीम अस्पताल र मेडिकल कलेजमा गरी ४ जनाको अक्सिजन नपाएर मृत्यु भयो ।
अस्पतालमा बिरामी र उनका अफन्तको रुवाबासी छ । अक्सिजन नभएर बिरामी बचाउन नकस्‍दा डाक्टर नै रुन थालेका छन् । आज कोभिड अस्पतालका डा. नन्दु पाठक पत्रकारहरूसँग रोए । अक्सिजन अभावमा कसैले संवेदशीलता नबुझेको भन्‍दै डा. पाठक रोए ।
अहिले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा बिराटनगरबाट अक्सिजन भरिएका ४० थान सिलिन्डर रुपन्देही आइपुगेको छ ।